Vanhukadzi Votaura Zvavanoda Kuona Mubumbiro Idzva
Sachigaro vekomiti yevanhukadzi mudare reparamende, kana kuti Women’s Parliamentary Caucus, Amai Biata Beatrice Nyamupinga, vanoti vari kushushikana zvikuru nekusavapo kwedzidziso yakakwana kumadzimai pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Amai Nyamupinga vakataura mashoko aya pamusangano wakaitirwa kwaMutare neMuvhuro, uyo wakapindwa nemadzimai anodarika mazana mashanu.
Amai Nyamupinga, avo vanomiririra Goromonzi West mudare reparamende, vakati pane zvipingaidzo zviri kuita kuti vasakwanise kusvika kumadzimai ose, uye vava kutovimba nevatori venhau kuti shoko ravo risvike kune veruzhinji.
Amai Nyamupinga vakati madzimai ane shuviro yekuti mubumbiro idzva muve nemukana wekuti varume nevanhukadzi vagovane nepakati zvigaro zvemasimba.
Vachitaurawo pamusangano uyu, seneta weChimanimani, Amai Monica Mutsvangwa, vakatiwo kodzero dzevanhukadzi dzikaremekedzwa nebumbiro remitemo, zvinoita kuti madzimai arerukirwe nehupenyu.
Seneta veMutare, Amai Keresenzia Chabuka, vakatiwo dzidziso yavari kuita kumadzimai, yakakosha sezvo ichigadzirisa zvinhu kuti zvivanakire.
Muzvare Sithokozile Thabethe, avo vanoshanda neZimbabwe Women Lawyers’ Association, vanoti havana nguva yakawanda yekufambisa dzidziso muvanhukadzi, sezvo hurongwa hwekupinda muvanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva, hwava pedyo. Hurongwa uhu huri kutanga musi wa 15 Chikumi.
Mumwe wemadzimai akapinda mumusangano uyu, Amai Maud Chizaza, vakatiwo misangano yakadai yakakosha, sezvo vachikwanisa kudzidza zvinhu zvitsva maererano nekodzero dzemadzimai.
Musangano uyu wakavhurwa zviri pamutemo nagavhuna weManicaland, VaChris Mushowe, avo vakange vakamirirwa naProvincial Administrator, VaFungai Mbetsa. Vamwe vakapinda mumusangano uyu vanosanganisira mumiriri weChipinge central, Amai aAlice Mwaemura Chitima, mumiriri weChimanimani West, Amai Lynnette Karenyi Kore, vanova ndivo chete vamiriri veparamende vechidzimai muManicaland, pamwe chete nemaseneta maviri, Amai Chabuka na Amai Mutsvangwa.
Musangano wakadai uchaitwawo mumatunhu ose emunyika nechinangwa chekuedza kupa dzidziso kumadzimai kuitira kuti vape pfungwa dzavo pakunyorwa kwebumbiro idzva.